Dhaqaatiirta oo ku talinaya in Malabka lagu daweeyo qufaca - BBC News Somali
Image caption Malabka oo la dhiirigalinayo in loo qaato qufaca
Malabka iyo dawooyinka dabiiciga ah ee aysan dhaqaatiirta soo qorin ayaa ku habboon in marka ugu horreysa loo isticmaalo la tacaalidda qufaca, sida ay muujineyso talo cusub oo ka soo baxday khubarada.
Xeel dheerayaasha dhinaca caafimaadka ayaa sheegay in daawooyinka qallajiyaha ee loo yaqaanno Antibiotics-ka ee ay soo qoraan dhaqaatiirta ay si dhif iyo naadir ah wax uga qabtaan qufaca, sababtoo ah inta badan saameyntooda ayaa ah mid aad u yar.
Taladan cusub oo dhaqaatiirta kale xitaa ku boorrisay in ay Malabka tixgalin siiyaan ayaa looga gol leeyahay in lagu xakameeyo dhibaatooyinka ka dhasha dawooyinka qallajiye ahaanta loo adeegsado.
Sababaha keena xanuunka shalalka
Maxaa sababa xanuunka Sokorowga ama Macaanka?
Sidee looga hortagi karaa xanuunka neefta?
Noocyo badan oo ka mid ah dawooyinkaas ayaa marka dambe sababa in uu jirka iska caabbin ku sameeyo oo ay wax tar la'aan noqdaan.
In si xad dhaaf ah loo isticmaalo qallajiyeyaasha ayaa waxaa ka dhasha caabuq ay adag tahay in si fudud loo daaweeyo, kaasoo abuura unugyo ka hor taga falgalka dawada.
Biyo kulul oo lagu qaso Malab - oo inta badanna lagu daro liin dhanaan iyo sanjabiil - ayaa aad looga yaqaannaa in guryaha laga isticmaalo, si loogu daweeyo qufaca iyo xanuunnada yar yar ee ku dhaca dhuunta.
Talo soo jeedintaan cusub oo ay si wada jir ah u soo saareen khubarada Machadka qaran ee caafimaadka iyo xannaanada waddanka Ingiriiska iyo waaxda caafimaadka dadweynaha ee (PHE) ayaa lagu sheegay in dawooyinkaas dabiiciga ah ay ka waxtar badan yihiin kuwa ay dhaqaatiirta soo qoraan.
Image caption Kaniiniyaal
Bukaannada ka cabanaya qufaca ayaa si adag loogu boorriyay in aysan ku deg-degin isbitaalka oo ay isticmaalaan habkaas, ayna sugaan inta ay saameynta qufaca u dhammaaneyso si iskeed ah.
Horay ayey cilmi baareyaasha Ingiriiska u soo saareen in 48% oo ka mid ah bukaannada isbitaallada UK u taga si qufaca looga daweeyo in ay dhaqaatiirta u qoraan dawooyin qallajiyeyaal ah.
Dr Susan Hopkins, oo ah agaasime ku xigeenka waaxda caafimaadka dadweynaha ee PHE ayaa tiri "Iska caabbinta jirka ee ka abuuranta dawooyinka qallajiyaha ah ka dibna ka hor tagga ku sameysa waxay dhibaato weyn ku tahay caafimaadka qofka, waxaana u baahannahay inaan hadda tallaabo u qaadno yareynta isticmaalka qallajiyeyaasha".
"Talooyinkaan cusub waxay isbitaallada ka caawin doonaan in ay dhimaan bixinta daawooyinkaas qallajiyaha ah, waxaana ku dhiirri gelineynaa bukaannada in ay qaataan taladan caafimaad ee muhiimka ah" ayey sii raacisay.
Hase ahaatee, talooyinkan ayaa sidoo kale lagu xusay in mararka qaar ay qallajiyeyaasha lagama maarmaan u yihiin haddii ay qufaca la socdaan xanuunno kale oo halis ah, ama xaalado daciifiyay hannaanka difaaca jirka.
Sidoo kale lama soo jeedinnin in Malabka loo isticmaalo carruurta ay da'dooda ka hooseyso hal sano waayo waxa uu wataa bakteeriyo uusan xamili karin cunug yar.
Dr Tessa Lewis ayaa dadka kula talineysa in ay marka ugu horreysaba la xiriiraan farmashiyeyaasha iyo dhaqaatiirta si looga hubiyo qufaca oo mararka qaar laga yaabo in ay cudurro kale ku qarsoon yihiin.
Madaxa arrimaha caafimaadka ee England, Prof Dame Sally Davies, ayaa horay uga digtay saameynta xun ee ka abuurmi karta in si xad dhaaf ah loo isticmaalo qallajiyeyaasha.
"Haddii ay dawooyinku waxba tari waayaan caabuqa wuu sii xoogeysanayaa waxaana adkaaneysa in la daweeyo oo halistiisa laga badbaado" ayey tiri
Khubarada soo saartay talooyinkaan caafimaad ayaa ilaa 20-ka bisha Siteembar dadka u sharrixi doona sida loo raacayo talo bixintooda.